China Aspirator AVERLAST 25 fekitori uye vagadziri | AngelBiss
AngelBiss Inotakurika Suction Machine ine hunyanzvi Direct plug-in Bhodhoro Sisitimu uye Double Anti-inopfachukira dziviriro sisitimu.
Iko kukura kukuru kwebhodhoro kunodzivirira iwe kudzokorora kupomba chiito. Uye iyo bhodhoro haina mvura uye inoshandiswazve. Ichachengetedza zviwanikwa.
Iyo Inotakurika Kuburitsa Muchina inongova chete imwe yekupinda. Zviri nyore kuti uishandise. Bhodhoro rekutsveta nemuviri wemuchina zvakaenzana zvakakwana.
Iyo zvakare ine nyoro pombi hanger. Zvichava zviri nyore kurongedza kana wapedza kuishandisa.
Yakagadzirirwa chaizvo kunyorera nekumisikidza kuyerera uye kumanikidza hunhu, inotakurika suction muchina inopa inokurumidza uye inoshanda nzira yekuchenesa ropa remurwere, mvura, pus uye imwe viscous mvura mushure mekuvhiyiwa.
Paunenge uchinge uine inotakurika yekukweva muchina, iyo inopa nekukurumidza uye inoshanda sevhisi mune yekukurumidzira kamuri uye yekuvhiya imba.
AngelBiss Inotakurika Suction Machine dhizaini kubva ku18L uye 25L kuyerera kwemweya, iine vacuum control renji 0.07Mpa ~ 0.08Mpa. Uye inowanikwawo
muna 110V kana 220V.
Ndokumbirawo kuti musarudze yakakodzera chikumbiro chako chakakosha.
Pashure: Dentistry Inotakurika Kubvisa Machine
Zvadaro: AUTO CPAP / BIPAP